काठमाडौंमा प्रचण्ड-नेपाल समूहले गर्ने शक्ति प्रदर्शनमा कहाँ कसले नेतृत्व गर्ने ? Canada Nepal
काठमाडौंमा प्रचण्ड-नेपाल समूहले गर्ने शक्ति प्रदर्शनमा कहाँ कसले नेतृत्व गर्ने ?
काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल समूहले बुधबार काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि विभाजन भएको नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ ।
बुधबार पनि यस समूहले काठमाडौंको विभिन्न स्थानबाट जुलुस निकाल्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध प्रचण्ड नेपाल समूहले यसअघि पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको थियो ।
संसद् विघटनविरुद्को केन्द्रीय संघर्ष समितिले बुधबार काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट जुलुस शुरु हुने स्थान र नेतृत्वको बारेमा जानकारी दिएको छ । समितिले जारी गरेको सूचना अनुसार पुल्चोकबाट निस्कने जुलुसको नेतृत्व कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भुसाल, रघुजी पन्त, प्रमेश हमाल तथा संघ प्रदेशका सांसदहरुलाई दिएको छ ।
त्यस्तै त्रिपुरेश्वरदेखी सुन्धरा हुँने जुलुसमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, चक्रपाणि खनाल, जनार्दन शर्मा, मुकन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली, वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णुपुकार श्रेष्ठ लगायतले नेतृत्व गर्नेछन् ।
यस्तै माइतीघर, केशरमहल र जमलमा पनि केन्द्रीय संघर्ष समितिले विभिन्न नेताहरुलाई नेतृत्व दिएको छ । मूल जुलुस शुरु हुने स्थान सुन्धारा १२ बजे बताइएको छ ।
माघ २६, २०७७ सोमवार १९:२२:०३ बजे : प्रकाशित